Wednesday May 22, 2019 - 15:10:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.
Saraakiil ciidan,mas'uuliyiin iyo xildhibaanno ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii naf hurnimo ee maanta barqadii ka dhacay nawaaxiga madaxtooyada sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonyahay.
Mas'uuliyiinta ku dhintay qaraxii maanta waxaa kamid ah Xuseen Ceelaabe Faahiye oo horay usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda dowladda Federaalka islamarkaana hadda hayay xilka lataliyaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda.
Haweenay Jeneraalad ah oo magaceeda lagu sheegay Faay Cali Raage ayaa kamid aheyd saraakiishii ciidamada dowladda ee lagu dilay qaraxii maanta, ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in dhimashada qaraxii maanta ay gaartay 27 qof oo ubadan ciidamado ilaala u ahaa xildhibaannada dhaawacmay iyo saraakiisha dhintay.
Goobta weerarku ka dhacay oo ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo waxaa si lama filaan ah uga dhax dusay gaari uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis hure ah, Xarakada Al Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkii maanta ayaa ku hanjabtay in ay sii wadayso beegsiga askarta iyo mas'uuliyiinta dowladda.